आमाको सपना पूरा गर्न सुमित पाठकले ब्यान्ड खोल्ने ! – Rastriyapatrika
आमाको सपना पूरा गर्न सुमित पाठकले ब्यान्ड खोल्ने !
झापाका सुमित पाठकले काठमाडाैं अडिसनमा ‘गल्ती हजार हुन्छन्’ बोलको गीतमा कर्णप्रिय आवाज दिएर गोल्डेन बाइक जितेका थिए। सानैदेखि घरमा सांगीतिक माहोलमा हुर्किएका सुमितका बुवा संगीत शिक्षक हुन्।
बच्चाबेलादेखि नै उनी गायनमा अब्बल थिए। सानोमै आमाको मायाबाट वञ्चित पाठकलाई संगीतले भने निरन्तर साथ दिइरह्यो। उनकी आमा छोराले राम्रो गरोस् भन्ने चाहन्थिन्। ‘आमाको सपना पूरा गर्न पनि म संगीतमा मेहनत गरिरहेको छु’, उनले बताए।